Waggaa darbe namoonni miiliyoonni 70 ol qayee fi qabeenya isaanitirraa buqqa’aniiru – Fana Broadcasting Corporate
Waggaa darbe namoonni miiliyoonni 70 ol qayee fi qabeenya isaanitirraa buqqa’aniiru
Finfinnee, Waxabajjii 12,2011(FBC)- Waggaa darbe keessa sadarkaa addunyaatti namoonni miiliyoonni 70 ol qayee fi qabeenya isaanitirraa buqqa’uu Dhaabbanni Mootummoota Gamtooman beeksise.
Koomiishinii Olaanaan Dhimma Baqattootaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii akka beeksisetti, waggaa darbe sadarkaa addunyaatti namoonni miiliyoona 70 ol sababii waraanaa, walitti bu’iinsaa fi gogiinsatiin qayee isaanitirraa buqqa’aniiru.
Kunis waggootii hojii waggaa 70 koomiishinichaatti lakkoofsa olaanaa ta’uu beeksiseera.
Gabaasni buqqaatotaa miiliyoona 70.8 yoo ta’u, kunis kan waggaa isa duraarra daballii miiliyoona 2.3 akka qabu eerameera.
Lakkoofsi kunis guyyaadhan buqqaatonni haaraan kumni 37 akka jiran muul’isa.
Buqqaatii dhiyoodhan Veenzuweelaan miiliyoona 4n duursaa jirti.
2/3ffaan buqqaatotaa Sooriyaa, Afgaanistaan, Sudaan Kibbaa, Maaynaamaarii fi Soomaaliyaarrayi.
Bara Faranjootaa 2018 Ityoophiyaadhaa lammiilee miiliyoonni 1.5 kan buqqa’an yammuu ta’u, kana keessaa %98 buqqaatii biyya keessaa akka ta’e eeramee kunis kan waggootii darbeerra dachaadhan dabaluun himameera.
Agarsiisni balaa tiraafikaa baname
Preezdaant Saahilawarq sagantaa sirna gaggeessa…